परीक्षण घटाएर संक्रमण नबढेको प्रचार गर्दैछ सरकार - Himal Dainik
परीक्षण घटाएर संक्रमण नबढेको प्रचार गर्दैछ सरकार
काठमाडौँ १४ श्रावण २०७७, बुधबार १०:३३
मंगलबार पीसीआर परीक्षण भएका ५ हजार ३२ मध्ये ३ सय ११ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण देखियो। प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने परीक्षण भएकामध्ये ६.१८ प्रतिशतमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। यो लकडाउन अन्त्य भएपछिको सबैभन्दा बढी संक्रमण हो।
सोमबार मात्रै नियमित प्रेस व्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले लकडाउन हुँदा र नहुँदामा संक्रमणको प्रतिशतमा खासै फरक नभएको बताएका थिए। ‘लकडाउन भएको बेला साउनमा १ देखि ६ गतेसम्म संक्रमणको प्रतिशत अनुपात ३.२ थियो लकडाउन खुलेपछि ७ देखि १२ गतेसम्म संक्रमणको प्रतिशत अनुपात ३.३ छ,’ प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘लकडाउन खुलेपछि जोखिम बढेको छ। मानिसहरुको भिड्भाड बढेको छ। अत्यावश्यक काममा मात्र बाहिर निस्कनुहोला। निस्कँदा स्वास्थ्यको सुरक्षामा ध्यान दिनुहोला।’
तर, सरकारले लकडाउन खुलेपछि संक्रमणदर ह्वात्तै बढेको नदेखाउन परीक्षणको दायरा घटाएर जनताको आँखामा छारो हालेको देखिएको छ। जुन मंगलबारको परीक्षण दर संक्रमणको प्रतिशत हेर्दा प्रष्ट भइहाल्यो।
हामीले लकडाउन खुलेर, भिडभाड बढ्दा पनि किन संक्रमणको दर बढेन त भनेर लकडाउन खुल्नु अगाडि र लकडाउन खुलेपछिको एकरएक हप्ताको तथ्याङ्क खोज्यौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस व्रिफिङमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक हेर्दा सरकारले परीक्षण घटाएर संक्रमण दर उच्च दरमा नबढेको देखाउन खोजेको देखियो। लकडाउन खोल्नु अगाडि साउन एकदेखि ६ गतेसम्म २४ हजार ९ सय २० जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको सरकारले लकडाउन खुलेपछि ७ देखि १२ गतेसम्म २२ हजार ३ सय ३२ जनाको मात्रै परीक्षण गरेको तथ्यांकमा देखियो।
लकडाउनमा २४ हजार ९ सय २० जनाको परीक्षण गर्दा ८ सय १७ जनामा संक्रमण देखियो। जुन ३.२७ प्रतिशत हो। खुलेपछि २२ हजार ३ सय ३२ जनामा परीक्षण गर्दा ७ सय ५८ जनामा संक्रमण देखियो। जुन ३.३९ प्रतिशत हो। लकडाउन खुलेपछिको हप्तामा सरकारले अघिल्लो हप्ताभन्दा २ हजार ५ सय ८८ कम संख्यामा परीक्षण गरेको छ। परीक्षण कम गरेर संक्रमण दर घटाउन खोजेको सरकारको बठ्याई मंगलबारको तथ्यांकले चकनाचुर बनाइदिएको छ। दैनिक ३ हजारको रेञ्जमा परीक्षण गर्दा ३ प्रतिशतको अनुपातमा देखिएको संक्रमण दर ५ हजारमा परीक्षण गर्दा बढेर ६ प्रतिशत काटेको छ।
यस्तो छ तथ्यांक:
लकडाउन पछि लकडाउन अघि
गते परिक्षण संक्रमण प्रतिशत गते परिक्षण संक्रमण प्रतिशत
साउन १२ ३,३०० १३९ ४.२१ साउन ६ ३,९६३ १५० ३.८७
साउन ११ ३,३०० १३० ३.९३ साउन ५ ४,२१६ १८६ ४.४१
साउन १० ४,०७५ १०९ २.६७ साउन ४ ३,७४१ १५६ ४.१७
साउन ९ ३,९८७ १३३ ३.३३ साउन ३ ३,३३१ ५७ १.७१
साउन ८ ३,८८१ १४७ ३.७८ साउन २ ४,६८८ १०१ २.१५
साउन ७ ३,७७९ १०० २.६४ साउन १ ४,९८१ १६७ ३.३५
जम्मा २२,३२२ ७५८ ३.३९ जम्मा २४,९२० ८१७ ३.२७
स्रोत: स्वास्थ्य मन्त्रालय
अझ स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार संक्रमण एउटै समुदायमा र ‘ट्राभल हिस्ट्री’ नभएकामा देखिएको छ। आइतबार प्रदेश एकमा संक्रमण देखिएका २६ जनाको ‘ट्राभल हिस्ट्री’ नभएको कन्ट्रयाक ट्रेसिङमा गएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् ।
केही दिन अगाडि प्रदेश २ को पर्सा जिल्लामा पनि ‘ट्राभल हिस्ट्री’ नभएका व्यक्तिलाई संक्रमण देखिएको थियो। ‘ट्राभल हिस्ट्री’ नभएका व्यक्तिलाई संक्रमण देखिनु भनेको समुदायमा भाइरस प्रवेश गर्नु हो। जोखिम अझ बढ्नु हो। तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतम खोखिम बढेपछि संक्रमण समुदायमा नपुगेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘लकडाउन खुलेपछि जोखिम त बढेको छ। समुदायमा संक्रमण फैलिएको प्रमाणित भएको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई संक्रमण समुदायमा फैलिएको मुलुकको सूचीमा राखेको छैन ।’
जनस्वास्थ्यविद र सरूवा रोगका विज्ञ डाक्टरहरू भने संक्रमण समुदायमा फैलन लागेको भन्दै सरकार गलत प्रचार गरिरहेको बताउँछन्। भुसको आगोझै संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिँदासमेत प्रदेश सरकारले नियन्त्रणका लागि तदारूकता देखाएको उनीहरूको आरोप छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठक सरकार लगत सूचना प्रवाह गरेर आफ्ना कमजोरी लुकाउन खोजिरहेको बताउँछन्। ‘हामीले परीक्षणको दायरा बढाउन भनिरहेका छौं। तर, सरकार घटाइरहेको छ,’ डा. पाठकले भने, ‘परीक्षण नै नगरेपछि त संक्रमण घटिहाल्छ। परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री जोहो गर्न नसकेर दायरा घटाउने, र जनतालाई संक्रमणको दर बढेको छैन भनेर ढाटिरहेको छ।’
सरूवा रोग विषेशज्ञ शुक्रराज ट्रपिकल सरूवा रोग अस्पतालका क्लिनिक रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनले संक्रमणको जोखिम लकडाउन खुलेपछि उच्च भएको बताउँछन्। ‘लकडाउन खुलेपछि मानिसहरू आ–आफ्नो कामका लागि बाहिँरिदा र भिडभाड बढ्दा जोखिम उच्च भएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन खुलेपछि जोखिम अझ बढी निम्तिएको छ,’ डा. पुनले भने, ‘परीक्षणको दायरा बढाउन हामीले दिएको सुझाव सरकारले मानिरहेको छैन। जसले परिस्थिति भयाभह बनाउने सम्भावना प्रवल हुँदै गएको छ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतम भने आवश्यकता नभएर परीक्षणको दायरा नबढाइएको बताउँछन्। ‘हामीसँग दैनिक १५ हजारसम्म परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ, आवश्यक भएमा त्यो मात्रामा गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छौं। अहिले आवश्यकता नदेखिएकाले परीक्षणको मात्रा ह्वात्तै बढाइएको छैन,’ प्रवक्ता गौतमले भने।
(फ्रिडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको सामाग्री)
फ्रिडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्य सामाग्री:
कोरोना संक्रमणको दर स्थिर भयो भन्दैमा ढुक्क नहुनू, संक्रमण अझै बढ्छ
कोरोनाको महामारीमा पनि राजनीति!
अघिल्लोरियाबिरुद्ध मुद्दा दर्ता, सुशान्तका बुवाले सोधे: १७ करोड कहाँ गयो ?
पछिल्लोकोभिड–१९ को जोखिम कायमै कूल ३८२ सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रमण